Rev. Oak Sinn Lah – Full Gospel Assembly
Rev. Oak Sinn Lah
သိက္ခာတော်ရဆရာမ အုတ်စင်းလကို၊ကျိုင်းတုံမြို့၊ဂျိုးဖြူရွာတွင် အဘ ဦးဂါဗေလနှင့်အမိဒေါ်ခင်လှ၏ သားသမီး(၆)ဦးအနက် ပဉ္စမမြောက်သမီးဖြစ်ပါသည်။ မူလတန်းပညာကို အ.လ.က (၅) ကျိုင်းတုံမြို့ သူငယ်တန်းမှဆဌမတန်းအထိတက်ရောက်သင်ယူခဲ့ပြီး၊ အ.ထ.က (၂) ကျိုင်းတုံတွင် ဆဌမတန်းမှအဌမ တန်းပညာကို တက်ရောက်သင်ယူခဲ့ပါသည်။ အ.ထ.က (၁) ဗဟန်းတွင် နဝမတန်းမှ ဒသမတန်းအထိ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၄ခုနှစ် ဧပြီလ(၁၄) ရက်နေ့တွင်အသင်းတော်မှပြုလုပ်သော လူငယ်သင်တန်းတွင် ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်တာ၏ကယ်တင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံခဲ့ပြီးရေနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှစ်ခြင်းကိုရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၆တွင် အသင်းတော်၏ လူငယ်မှုသာသနာလုပ်ငန်းတွင် စေတနာဝန်ထမ်းအဖြစ်စတင်ပါဝင်လာခဲ့ပြီး၂၀၀၇ခုနှစ်တွင် Full Gospel Bible Training Centre အပတ်စဉ်(၁၁)တွင်တက်ရောက်ပညာသင်ကာDiploma ရရှိခဲ့သည်။၂၀၀၈ခုနှစ်အထိရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဝေးသင်ပညာရပ်တွင်ဒုတိယနှစ်(စီးပွားရေး)၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ တွင် Rhema Bible Training School(S’pore) မှ Diplomaရရှိခဲ့သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစတင်ကာ အသင်းတော်တွင်အစမ်းခန့်အမှုတော်ဆောင်အဖြစ်ဆက်ကပ်လာခဲ့ပြီး၊၂၀၀၈-၂၀၀၉နှစ်တွင်လူငယ်သာသနာတွင် (ဘဏ္ဍာရေးမှူး(၂၀၁၀-၂၀၁၁)အထိလူငယ်အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ မေလရက်တွင်Young Adult Ministry ကိုစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး Seminar,Conference,စသည့် ရက်တိုသင်တန်းများကိုဦးဆောင်ကာတစ်ဦးချင်း Councelling လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းခွင်ရှိ လူငယ်/လူကြီးများကိုအမှုတော်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၃ မေလ ( )ရက်နေ့တွင် လိုင်စင်ရဓမ္မအမှုတော်ဆောင်အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၂၀၁ရခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၆)ရက်နေ့တွင် သိက္ခာတော်ရဆရာမအဖြစ်ဓမ္မသိက္ခာတင်ခဲ့ပါသည်။
အမှတ် (၃၂) အခန်း (၂၀၁) ရတနာလမ်း၊